Kitra – «Ligue des champions d’Europe 2016» : nandresy fa tsy mbola afaka ny FC Barcelone | NewsMada
Mbola saro-pantarina izay ho tafavoaka eo amin’ny FC Barcelone sy ny Atletico de Madrid, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra. Fandresena tamin’ny elanelan’isa kely mantsy no azon-dry Messi sy ry Neymar.
Tsy mbola afaka misioka ny FC Barcelone, eo amin’ny fiadiana ny “Ligue des champions d’Europe”, taranja baolina kitra. Tamin’ny isa tery, 2 noho 1, mantsy ny nahazoany fandresena, nanoloana ny Atletico de Madrid, teo amin’ny lalao ampahefa-dalana mandroso, ho an’ity fifaninanana ity. Fihaonana, natao tao amin’ny kianja Camp Nou, ny talata lasa teo.
Sahirana ny Barça, notarihin’i Messi sy Neymar ary Suarez, satria nampiditra baolina voalohany, tamin’ny alalan’i Torres, teo amin’ny minitra faha-25 ny Atletico, rehefa nahazo tolotra tsara avy amin’i Koke.
Niezaka nanamboatra sy nanafika avy eo ny mpampiantrano, saingy tsara fiarovana ny Madrilènes.
Nanomboka henjankenjana ny fifandonana teo amin’ny mpilalao roa tonta ka niraradraraka ny karatra mavo. Niafara tamin’ny fahazoan’i Torres karatra mena mihitsy izany, teo amin’ny minitra faha-35. Voatery nanamafy ny hidin-trano ny Atletico nanomboka teo. Nitsitapitapy, araka izany, ny fanafihan’izy ireo, izay notarihin’i Griezman. Na izany aza, tsy nisy nahatafiditra baolina ny roa tonta fa nisaraka tamin’io tombon’isa azon’ny Atletico io, teo amin’ny 45 mn voalohany.
Pao-droa ho an’i Suarez
Totoafo ny fanafihan’ny Barça teo amin’ny fizaram-potoana faharoa. Nahitam-bokany izany satria nahafaty baolina roa i Suarez. Ny voalohany, teo amin’ny minitra faha-63 ary ny faharoa, teo amin’ny minitra faha-74, taorian’ny tolotra tsara nomen’i Dani Alves azy. Mbola nitohy hatrany ny fifamelezana teo amin’ireo mpilalao ka nahazo karatra mavo iray koa i Suarez, teo amin’ny minitra faha-70.
Saika nasahala ny isa ny Atletico, teo amin’ny minitra faha-89, tamin’ny alalan’i Augusto Fernandez, saingy voasakana ny dakany.
Afaka herinandro ny lalao miverina any Madrid, izay mbola ho gidragidra tanteraka.
Ankoatra izay, nivoaka sempotra koa ny Bayern de Munich vao nandresy ny Benfica. Tamin’ny isa tokana, 1 noho 0, ny nisarahan’ny roa tonta. Baolina tafiditr’i Vidal, teo amin’ny minitra faha-2 nanombohan’ny lalao.